कसरी सुरु भयो ‘होली’ पर्व ? के हो यसको मर्म र कसरी गर्ने आत्मसात् ? — Newskoseli
प्रभाषचन्द्र झा/राससपोखरा, ५ चैत ।
यस पर्वमा मीठो परिकार बनाउने र खाने गरिन्छ । होलीमा खासगरी ‘मालपुवा’ अनिवार्य रुपमा पकाइन्छ । पकाइएका परिकार सबैभन्दा पहिले घरका ‘देवी–देउता’ लाई चढाइन्छ, त्यसपछि मात्र खाने गरिन्छ । अचेल मासु पनि खाने गरिएको छ । कतिपयले भाङ–गाँजा र रक्सीजस्ता नशालू पदार्थ समेत खाएर होली मनाउने गर्दछन् । यस पर्वमा देखिएका यस्ता विकृति अन्त्य गर्न समाज अग्रसर हुनुपर्ने देखिएको छ ।